बण्डको पैसा फिर्ता लिन के गर्नुपर्छ ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७४-१०-२४ बिचार / प्रतिक्रिया
म मेक्सिको बोर्डर भएर अमेरिका प्रवेश गरेको हुँ । आइसले पक्राउ गरेपछि बण्ड तिरेर निस्केको थिएँ । टेक्सासको एक स्थानीय वकिलमार्फत बण्ड राखेको थिएँ । अहिले न्यूयोर्कको इमिग्रेसन जजले मेरो शरणार्थीको निवेदन स्वीकृत गरिदियो । बण्डमा निकै ठूलो रकम राखेको थिएँ । अहिले बण्डको पैसा फिर्ता लिनलाई के गर्नुपर्छ होला ? केके कागजपत्रको आवश्यक पर्छ हाला ? जबाफका लागि धन्यवाद ।
– रनोज, न्यूयोर्क
तपाईंको असाइलम एप्लिकेसन भएकोमा बधाई छ । तपाईंको असाइलमको निवेदन स्वीकृत भएपछि युएससीआईएसले सो बण्ड क्यान्सिल गर्नेछ । अर्थात् बण्डमा रहेको रकम युएस गभर्मेन्टले फुकुवा गर्नेछ । सो बण्डमा रहेको रकम फिर्ता लिनका लागि सो बण्ड राख्ने व्यक्तिले बण्ड राख्दा प्राप्त गरेका कागजपत्रहरु जस्तै– फर्म ३०५ जस्ता कागजपत्र साथै राखी युएससीआईएसमा बण्ड फिर्ता पाऊँ भनी सो बण्ड क्यान्सिल भएको सूचनापत्रसमेत राखी पेश गर्नुपर्नेछ । ती सम्पूर्ण कागजपत्र युएससीआईएसले प्राप्त गरेपछि आवश्यक प्रोसेसिङ गरी सो बण्ड राख्ने व्यक्ति अथवा ‘अब्लिगर’को नाममा युएस ट्रेजरीले ब्याजसहित रकम फिर्ता गरिदिनेछ । यदि अब्लिगर या बण्ड राख्ने व्यक्ति तपाईंको मान्छे हो वा कुनै अरु व्यक्ति भए तुरुन्त सम्पर्क राख्नु जरुरी छ । कारण सो बण्डको रकम सो व्यक्तिबाहेक अन्यले रिलिज गर्न सक्ने छैन ।
म ग्रीनकार्ड होल्डर हुँ । मेरो विवाह केही दिनमा हुनेवाला छ । मेरो श्रीमती एफ–१ स्टाटसमा छिन् । गएको केही महिना अघि ग्रीनकार्डको स्पाउसेसले पनि सिटिजनसरह आई–१३० र आई–४८५ एकैचोटि युएससीआईएसमा फायल गर्न पाउने भन्ने सुनेको थिएँ । अहिलेको अवस्थामा पनि त्यही नै नियम रहेको छ कि त्यो प्रोग्राम बन्द भइसकेको छ । उत्तरका लागि धेरैधेरै धन्यवाद ।
– अनन्त, अमेरिका
ग्रीनकार्ड होल्डर वा पर्मानेन्ट रेसिडेन्टको स्पाउसेसहरु एफ–२ ए क्याटगोरीमा पर्दछन् । अर्थात्यी क्याटगोरीले वार्षिक प्राप्त हुने भिसा कोटामा भर पर्नुहुन्छ । गएको सेप्टेम्बर २०१३ को भिसा बुलेटिनअन्तर्गत एफ–२ए क्याटगोरीका लागि भिसा करेन्ट भएकोले सेप्टेम्बर ३०, २०१३ सम्म दर्ता हुने आई–१३० र आई–४८५ लाई युएससीआईएसले स्वीकार गरी प्रोसेस गर्नेछ । तर, अहिले अक्टोबर २०१३ को भिसा बुलेटिनमा एफ–२ए क्याटगोरीका लागि भिसा करेन्ट छैन । यो क्याटगोरीको ब्याकलग अहिले सेप्टेम्बर ८, २०१३ मा पर्न गएको छ । अर्थात् सेप्टेम्बर ८, २०१३ वा सो मितिभन्दा अघि फायल भएका आई–१३० पेटिसनको स्पाउसहरुले अहिले पनि आई–४८५ एप्लिकेसन फायल गर्न सक्नेछ । तर, सो बेनिफिसियरी, स्पाउसहरु ल फुल स्टाटसमा रहेको हुन जरुरी छ । यो अक्टोबरमा तपाईंको विवाह भए आई–१३० पेटिसन फायल गर्न सक्नुहुनेछ र जब तपाईंको आई–१३० पेटिसनका लागि भिसा बुलेटिनमा भिसा करेन्ट हुन्छ तपार्इंको श्रमितीले आई–४८५ एप्लिकेसन फायल गर्न सक्नुहुनेछ ।